मंसिर १३, काठमाडौं । यो साताको कारोबारमा शेयर बजारले ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरेको छ । बजार हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुग्नुका साथै यो साता सर्वाधिक रकम बराबरको सर्वाधिक कित्ता शेयर शेयर कारोबार भएको छ ।
साताको अन्तिम कारोबार दिन नेपालको शेयरबजारले १ हजार ८९३ दशमलव २४ विन्दु कायम गरेको हो । यस अघिको ऐतिहासिक १ हजार ८८१ विन्दु पार गर्न यो साता नेपालको शेयर बजार सफल भएको छ ।
गत साताको तुलनामा यो साता नेप्से परिसूचक ११५ दशमलव १२ अंक माथि उक्लिएको हो । गत साताको अन्तिम कारोबार दिन मंसिर ४ गते बिहीवार नेप्से परिसूचक १ हजार ७७८ दशमलव १२ विन्दुमा थियो ।
साताको पाँच कारोबार दिनमा दोस्रो कारोबार दिन नेप्से २ दशमलव ३८ अंकले सामान्य करेक्सन भएको थियो । साताको पहिलो दिन ४ दशमलव ६९, तेस्रो दिन २९ दशमलव ६८, चौथो दिन ६४ दशमलव ७० र पाँचौ दिन १८ दशमलव ४३ अंकले बजार बढेको हो ।
नेप्से परिसूचकसँगै सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि यो साता २२ दशमलव ११ अंकले बढेको छ । ठूला कम्पनीहरुको मात्र कारोबार मापन गर्ने यो इन्डेक्स ३६५ दशमलव १८ विन्दुमा पुगेको हो ।
परिसूचकमा मात्र हैन कारोबार रकमले पनि ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गर्दा नेपालीहरुले पछिल्लो समय पूँजीबजारलाई विश्वास गरेको देखिन्छ । यो साता हालसम्मकै उच्च रकमको शेयर कारोबार भएको छ । पाँच कारोबार दिनमा रू. ३१ अर्ब ५४ करोड ३१ लाख ८८ हजार बराबरको ७ करोड ५८ लाख ३८ हजार ८६४ कित्ता शेयर कारोबार भएको हो ।
गत साता तिहारको बन्द पछि खुलेको बजारमा दुई दिनमात्र कारोबार भएको थियो । गत साता दुई दिनको कारोबारमा पनि रू. १० अर्ब ९० करोड ७७ लाख ७७ हजार बराबरको २ करोड ५७ लाख ३७ हजार ३८२ कित्ता शेयर कारोबार भएको थियो ।
नेप्से परिसूचक करीब १ हजार ९०० विन्दुमा पुग्न लाग्दा नेपालको शेयर बजारको आकार अर्थात कुल बजार पूँजीकरण रू. २५ खर्ब ३७ अर्ब ४४ करोड २० लाख पुगेको छ । यो साता बजारको आकार रू. १ खर्ब ५४ अर्ब ७३ करोड २० लाखले बढेको हो ।
यो साता सर्वाधिक रकमको शेयर कारोबार नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको भएको छ । कम्पनीको रू. २ अर्ब ८० करोड बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको हो । सर्वाधिक रकमको शेयर कारोबारसँगै कम्पनीको शेयरमूल्य पनि यो साता उच्च दरमा बढेको छ ।
गत साताको अन्तिम कारोबार दिन प्रतिकित्ता रू. १ हजार ११० रहेको कम्पनीको शेयरमूल्य यो साताको अन्तिम दिन रू. १ हजार ३३९ पुगेको हो । सातामा कम्पनीको शेयरमूल्य रू. २२९ ले बढेको हो । यो साता चार ओटा वाणिज्य बैंकहरु नेपाल बैंक, एनआईसी एशिया, नबिल बैंक र प्रभु बैंक सर्वाधिक रकमको कारोबार गर्ने दश कम्पनीभित्र परेका छन् ।
त्यस्तै नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, हिमालयन डिष्टिलरी, शिवम् सिमेण्ट्स र नेको इन्स्योरेन्स पनि सर्वाधिक रकमको कारोबार गर्ने १० ओटा कम्पनीभित्र रहेका छन् ।
सर्वाधिक बजार पूँजीकरण भएका १० ओटा कम्पनीहरु (रकम रू. १० लाख)
धितोपत्र दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरुमध्ये सर्वाधिक कुल बजार पूँजीकरण यो साता पनि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीकै कायम भएको छ । यस कम्पनीको कुल बजार पूँजीकरण रू. १ खर्ब ६३ अर्ब ३५ करोड पुगेको हो ।
पछिल्लो अन्तिम कारोबार दिन नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको अन्तिम शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. १ हजार ८९ पुगेको छ । यस कम्पनीको १५ करोड कित्ता शेयर धितोपत्र दोस्रो बजारमा सूचीकृत रहेको छ ।
त्यस्तै ६ करोड कित्ता शेयर सूचीकृत रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको कुल बजार पूँजीकरण रू. १ खर्ब ३३ अर्ब ९० करोड पुगेको छ । यो कम्पनी सर्वाधिक पूँजीकरण भएको कम्पनीमध्ये दोस्रो नम्बरमा रहेको छ ।